सेक्स चैट रूलेट
सेक्स च्याट रूले भिडियो च्याट रूलेटको निःशुल्क प्रयोग गरेर निःशुल्क भर्चुअल सेक्सको आनन्द लिने अवसर हो। तपाईंको शहरमा वेब क्यामेराको अगाडि केटी वा केटालाई भेटाउन तपाईंलाई गाह्रो हुँदैन। सबै आवश्यक छ तपाईंको लि indicate्गलाई संकेत गर्न र "खोजी सुरूवात" क्लिक गर्नुहोस्। त्यसोभए सेक्स रूलेट आफैंले एक सम्भावित यौन साथीको छनोट प्रदान गर्न शुरू गर्दछ। केटाहरूको लागि, अश्लील च्याट रूलेटले सेक्स च्याटको लागि केटीहरूको विशाल चयन प्रदान गर्दछ, र केटीहरूले उनीहरूको भर्चुअल सेक्स पार्टनरलाई केटाहरू बीच फुलाउँछन् र यो रोमाञ्चक कुराकानीको आनन्द लिन्छन्।
रूसी रूले: अनौपचारिक अनलाइन डेटि।
नोभेम्बर २०० in मा शुरू भयो, Chatroulet.com रातारात शट भयो - केवल तीन महिना पछि, दुई आधिकारिक प्रकाशनहरू यस बारे लेख्दछन्: द न्यू योर्क टाइम्स र न्यू योर्क पत्रिका। पत्रकारहरूले भनेका कथाहरू वास्तविक अमेरिकी सपना साकार भएको धेरै सम्झना दिलाउने खालका थिए, र यसैले पश्चिमी पाठकलाई प्रेम भयो र रूसी प्रेसले तुरुन्तै यसको जवाफ दियो।
कथा यस प्रकार छः १ Moscow बर्षे मस्कोका स्कूलका साथी आन्द्रे टेर्नोभस्कीले सयौं अन्य बच्चाहरू जस्तै आफ्ना साथीहरूसँग कुराकानी गर्न वेबसाइट सिर्जना गरे। यस धारणाको सार भनेको कुनै वार्तालापकार छनौट गर्नु थिएन, किनकि यो हामीलाई ज्ञात कुनै पनि प्रकारको संचारमा गरिएको छ, तर दुर्घटनाबाट उसलाई "बम्प" गर्न - परियोजनाको निर्माताको रायमा, धेरै रमाइलो। समयको साथ, साइट, केवल व्यक्तिको सानो समूह द्वारा प्रयोग गरिएको, लोकप्रिय भयो। कुनै पनि विज्ञापन भन्दा मुखको शब्दले राम्रो काम गर्‍यो। के खास गरी चाखलाग्दो छ र अलिक अनौंठो पनि: यस परियोजनाले आफ्नो प्रारम्भिक ख्याति प्राप्त गर्‍यो जहाँबाट यो सब सुरु भयो - रूसमा थिएन, तर अ -्ग्रेजी भाषी देशहरूमा। सीआईएसको इलाकामा, पश्चिमी मेडियाले यस बारेमा लेख्नु भन्दा ठीक अघि नै स्रोत जनसाधारणको हेराइको क्षेत्रमा गिरावट आएको थिएन।
त्यसोभए, ठेगाना बारमा अब प्रख्यात डोमेन नाम टाइप गरेर, प्रयोगकर्ता एक धेरै साधारण इन्टरफेसको साथ पृष्ठमा लगिन्छ। खरानी सेतो पृष्ठभूमिमा, त्यहाँ दुई विन्डोजहरू छन्, जसमा प्रत्येक वेब क्यामेराबाट प्रसारित छवि समावेश गर्दछ। बाँयामा तपाइँको वार्तालाप छ, दायाँमा तपाइँ हुनुहुन्छ। अवश्य पनि, सेवाले काम गर्नका लागि तपाईसँग माइक्रोफोन, क्यामेरा र स्थिर इन्टरनेट जडान हुनु आवश्यक छ।
"नयाँ खेल" बटनमा क्लिक गरेर, तपाईं आफ्नो वार्तालाप देख्नुहुनेछ र कि त उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्नुहुन्छ, वा "अर्को" क्लिक गर्नुहोस् र कसैलाई राम्रो पाउनुहुनेछ। जहाँसम्म, यदि तपाईं खुशी हुनुहुन्छ र यसको बारे च्याट गर्न चाहनुहुन्छ भने र च्याट गर्न सक्दछ, किनकि "इन्टरनेटको अर्को पक्षमा" पनि व्यक्तिसँग छनौट गर्न अधिकार छ।
यस्तो सरल प्रतिक्रियाहरू, यदि आदिम सेवा भने असक्षम थियो।
धेरै रूसी मिडिया आउटलेटहरू र व्यक्तिगत ब्लगर्सले Cahtroulet.com लाई "विकृतिका लागि ठाउँ" भनेर आलोचना गरेका छन्। यो एक निराधार फैसला छैन। माथिको स्क्रीनशटमा हेर्नुहोस् कि यो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं केवल खुशी, खुशी अनुहारहरू मात्र होइन तर केही अनौंठो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यो ठीक छ यदि यो कार्निवल पोशाक वा नरम बैजनी खेलौना हो। तथ्य यो हो कि गैरजिम्मेवार साइट आगन्तुकहरूले उनीहरूको अज्ञातवास प्रयोग गरेर प्राय: मुख्य पृष्ठमा लेखिएका आधारभूत नियमहरू उल्ल .्घन गर्दछन्: "१ 16+ र नग्नता"।
र "विदेश", यसको विपरित, "खान्छ र प्रशंसा गर्दछ"। टेकक्रन्च स्रोतले दिएको वेबसाईट ट्राफिकको विश्लेषणका अनुसार users%% प्रयोगकर्ताहरू अमेरिकीहरू, १ followed% फ्रान्सेली र तेस्रो स्थान क्यानाडीहरू (१०% भन्दा कम) छन्। र यो, सामान्यतया, सजीलै व्याख्या गर्न योग्य छ - यी देशका प्रतिनिधिहरूले सजिलैसँग विमानमा सँगी यात्री, क्याफेटरियामा बस्ने छिमेकी, र सामान्यतया आकस्मिक परिचितहरू र कुराकानीहरूको लागि खुला छन् - हाम्रो देशवासी भन्दा फरक कुरा गर्छन्।
कुल साइट ट्राफिक पहिले नै एक महिनामा चार लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरू छन्, र दैनिक यातायात सयौं हजार मा मापन गरिएको छ। प्रत्येक सेकेन्डमा कति व्यक्ति अनलाइन छन् भनेर अनुमान गरिसकेपछि, कसैलाई प्रसिद्ध बनाउने भेट्न अविश्वसनीय रूपमा गाह्रो छ, जससँग तपाईंले लामो कुराकानी गर्न चाहानु भएको थियो। तर शायद। धेरै सेलिब्रेटीहरूले स्वीकार गर्छन् कि तिनीहरू कहिलेकाँही साइट भ्रमण गर्छन् र पर्याप्त समय खर्च गर्दछन्।
जहाँसम्म, कहिलेकाँही विपरित हुन्छ: केहि अज्ञात व्यक्तित्वहरू वास्तवमै वैश्विक लोकप्रियता प्राप्त गर्नका लागि व्यवस्थापन गर्छन्। उदाहरण को लागी, संगीतकार-सुधारक Merton, जो नेटवर्क को विशालता मा हजारौं आभारी श्रोता पायो।
Chatroulette विपरीत, जो एक विदेशी प्रयोगकर्ता को उद्देश्य हो, davaipogovorim.ru परियोजना रननेटमा विशेष रूपमा प्रमोट गरिएको छ। हामी कार्यक्षमता वर्णन गर्दैनौं, किनकि यसले पूर्ण रूपमा पहिले नै वर्णन गरिएको सेवा दोहोर्याउँदछ, तर ध्यान दिनुहोस् कि विकासकर्ताहरूले एउटा अति महत्त्वपूर्ण विवरण थप गरेका छन्: VKontakte को लागी एक विशेष अनुप्रयोग, जसले तपाईंलाई तपाईंको "घर" छोडेर कुराकानी गर्न अनुमति दिनेछ।
स्रोत र अनुप्रयोगको मुख्य दोष (र तिनीहरू सिnch्क्रोनाइजले कार्य गर्दछ) प्रयोगकर्ताहरूको स small्ख्या हो। परीक्षणको क्रममा, पहिले नै पाँचौं वा छैठौं क्लिकमा म उद्गार गर्न चाहान्छु: "बाह! सबै परिचित अनुहारहरू!"
हालसालै, हाम्रो चौकस पाठकले सम्झेझैं, एक सबैभन्दा ठूलो खोज इन्जिन र बहु-फोरन्टल पोर्टलहरू - मेल।रू - ले प्रसिद्ध भिडियो च्याटको आफ्नै एनालग खोल्यो। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, यदि तपाईंले "वेब क्यामेराको साथ मात्र खोजी गर्नुहोस्" चेकबक्सलाई समयमै जाँच गर्नुभएन भने, वार्तालापकर्ता वर्तमानमा सेवा प्रयोग गर्नेहरूमा मात्र होइन, सबै, सबै, सबै मेल।रू प्रयोगकर्ताहरूको खोजी हुनेछ। धेरै लाखौं हो), तर यसको मतलब यो हो कि लामो समयसम्म गतिविहीन अवतार चित्रहरू अवलोकन गर्न सम्भव हुनेछ। अन्यथा, तपाईंले कार्यक्षमतामा कुनै फरक देख्नुहुने छैन।
यो अनियमित कुराकानीले दुई विकल्पहरू छान्ने विकल्प प्रदान गर्दछ: पाठ र भिडियो। साइट पर्याप्त छिटो काम गर्दछ, त्यहाँ धेरै प्रयोगकर्ताहरू अनलाइन छन्। पाठ संचारको उपलब्धता बाहेक, च्याटलेटबाट अरू कुनै भिन्नताहरू थिएनन्।
Flytok.ru उही भिडियो च्याटको एक जटिल र अधिक रंगीन संस्करण हो। जब तपाइँ साइटमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तपाइँले तुरून्त दुईवटा फारामहरू देख्नुहुनेछ - एउटा साधारण लगइनको लागि, अर्को रजिष्ट्रेसनको लागि। जे होस्, परीक्षणको समयमा, दर्ता कुनै पनि हिसाबले काम गर्न चाहँदैन, जस्तै इन्टरफेस लि interface्कको आधा गर्दछ। त्यसकारण हामीले सेवाको केवल "साधारण" संस्करण मात्र विचार गर्नुपर्‍यो र सहकर्मीहरूको विचारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्‍यो।
पहिलो चीज जुन तपाईंको आँखा समात्छ: स्रोत जस्तो सरल देखिदैन। एनिमेसनको साथ धेरै स्पष्ट इन्टरफेस छैन, दर्ता आवश्यक छ। केवल अपरिचितहरू यहाँ केहि शब्दहरू साटासाट गर्न यहाँ भेला हुन्छन्, तर संचारमा गम्भीर रूचि राख्ने मानिसहरू। तपाईं आफ्नो प्रोफाइल भर्न, साथी बनाउन, प्रसारण हेर्न, फोटो एल्बम, पढ्न र ब्लग गर्न सक्नुहुन्छ। साइट प्रयोगकर्ताहरूको संख्या निश्चित रूपले च्याटलेटमा निकै कम छ, तर कहिलेकाहिँ यसले अर्को शुद्ध रूसी सेवालाई पछाडि पुर्‍याउन सक्छ। यो सेवा यसको प्रोटोटाइप भन्दा सामाजिक नेटवर्कको धेरै नजिक छ।
त्यस्तै कुरा टिनी च्याट नेक्स्टको बारेमा पनि भन्न सकिन्छ - यो प्राविधानको साथ कि यो एक विदेशी स्रोत हो, र समुदायहरू, साथै त्यहाँका प्रयोगकर्ताहरू मुख्यतया विदेशी हुन् - यो एक सामाजिक भिडियो च्याट हो। व्यक्तिहरू यस साइटमा एक मिनेट को लागी आउँदैन, तर पूर्ण संचारका लागि। भित्र आउनुहोस्, एक समुदाय छनौट गर्नुहोस् र शीर्षकमा च्याट गर्न सुरू गर्नुहोस्। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको आफ्नै समुदाय सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र अरूहरू तपाइँसँग सामेल हुनको लागि कुर्नुहोस्। तपाइँ तपाइँको फेसबुक वा ट्विटर खाताहरू मार्फत लग ईन गरेर दर्ता बिना गर्न सक्नुहुन्छ।
भिडियो च्याट रूले - एक सुविधाजनक अनलाइन डेटि service सेवा
जो कोही नयाँ सम्बन्धको लागि प्रयास गर्दछ, रमाईलो विषयहरूको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छ, साथी बनाउन, केटीहरूलाई भेट्न, अनलाइन डेटि of को एक सरल र सुविधाजनक तरिका प्रयास गर्नुपर्दछ - च्याट रूलेट। यो विशेष संसाधनले लाखौं इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको पहुँच खोल्छ, तपाईं रुचि राख्नु भएको रुचि संचार, प्रेम र मित्रता। वार्तालापको छनौट स्वस्फूर्त रूपमा हुन्छ, यो रुस, बेलारस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका र अष्ट्रेलियाबाटको एक व्यक्ति हुन सक्छ।
केटीहरूसँग भिडियो च्याटले केटाहरूलाई बिरूद्ध लिंगको साथ उनीहरूको सञ्चार कौशल अभ्यास गर्न र विश्वभरि गर्लफ्रेंडहरू बनाउन अनुमति दिन्छ। त्यहाँ एक राम्रो मौका छ कि यी अनौपचारिक वार्तालापहरु बीच त्यहाँ आत्माले छन्। केटीहरूसँग रूले च्याट गर्नु तपाईंको जीवनसाथी खोज्नमा भरपर्दो सहायक हो!
कसरी भिडियो च्याट रूले काम गर्दछ
जोको कम्प्युटर एक भिडियो क्यामेरा, माइक्रोफोन र स्पिकरहरू सहित सुसज्जित छ कुनै बोर्डरहरू बिना अनलाइन सञ्चारमा पहुँच गर्न सक्दछ। जे भए पनि, यो उपकरण हो कि भिडियो छवि प्रसारण र कुराकानी गर्न यो सम्भव बनाउँछ।
नाम प्रविष्ट गर्न आवश्यक छैन, तर भिडियो च्याटले रेजिष्टर्ड प्रयोगकर्ताहरूलाई अज्ञात व्यक्तिहरू भन्दा बढी विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। आफुलाई उत्तम प्रकाशमा प्रस्तुत गर्न सिफारिस गरिन्छ कि तपाइँले छोटो स्वागत भिडियो रेकर्ड गर्नुहोस्।
"खोजी सुरू गर्नुहोस्" बटन क्लिक गरेर, तपाईं स्वचालित रूपमा प्रणालीको सदस्य बन्नुहुनेछ। सम्भावित वार्तालापको छवि भिडियो च्याट विन्डोमा देखा पर्दछ: तपाईं एक व्यक्तिलाई हेर्नुहुन्छ र सुन्नुहुन्छ, उहाँ तपाईंलाई देख्नुहुन्छ र सुन्नुहुन्छ। यदि वार्तालापको व्यक्तित्व तपाईंलाई अप्रिय वा चिन्ताजनक देखिन्छ भने, "अर्को" बटन थिच्नुहोस् र नयाँ व्यक्तिमा जानुहोस्।
भिडियो च्याट रूलेका फाइदाहरू के हुन्
सबै भन्दा पहिले, भिडियो च्याट रमाईलो, सजिलो संचारका लागि नयाँ परिचितहरूको खोजी गर्न एक उपकरण हो। प्रत्येक विशिष्ट व्यक्तिको लागि हाम्रो सेवा प्रयोग गर्ने उद्देश्य फरक हुन सक्छ।
हाम्रो अनलाइन सेवाले प्रयोगकर्ताहरूलाई थुप्रै व्यक्तिगत समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम गर्दछ:
जटिलहरू पार गर्दै। लजालुपन र संचार कौशलको अभावले जीवनलाई धेरै गाह्रो बनाउँछ। हाम्रो भिडियो च्याट आत्मविश्वास प्राप्त गर्न, सजिलै कुराकानीमा प्रवेश गर्न सिक्न, अपरिचितहरूसँग कुराकानी राख्न र इश्कबाक गर्न मद्दत गर्दछ। अज्ञातताको सतर्कता, मोनिटर स्क्रिनबाट वार्तालापकर्ताबाट अलग हुनुका साथै कुनै पनि समयमा कुराकानीमा अवरोध पुर्‍याउने क्षमताले सुरक्षाको अनुभूति दिन्छ र तपाईंलाई बढी आराम र स्वतन्त्र महसुस गर्न दिन्छ।
एक जोडी खोज्दै। केटीहरूसँग रूले च्याटले तपाईंलाई गैर-नाम-कल गर्ने, रमाईलो अनलाइन सम्बन्ध स्थापना गर्ने अवसर दिन्छ, जसको विकास मात्र तपाईंमा निर्भर गर्दछ। सायद तपाइँ एक अर्कालाई यत्ति धेरै मन पराउनुहुनेछ कि तपाइँ अफलाइन च्याट गर्न निर्णय गर्नुहुन्छ। धेरैको लागि, हाम्रो भिडियो च्याट साँचो प्रेमको साथ एक मिल्ने ठाउँ भएको छ।
मनोवैज्ञानिक समर्थन। गाह्रो घडीमा, जब त्यहाँ नजिकका कोही पनि प्रियजनहरू छैनन्, आफ्नै समस्यामा मुछिएका समस्याहरूको सामना गर्न सजिलो हुँदैन। यस्तो अवस्थामा, अपरिचित व्यक्तिले पनि आफ्नो प्राण खन्याउन सक्छ, र नैतिक समर्थन र अपरिचितको राम्रो सल्लाह धेरै उपयोगी हुन सक्छ।
च्याट रूलेमा नयाँ साथीहरू कसरी फेला पार्ने
यो भेट्न सजिलो छ, कुराकानी गर्न, भिडियो च्याटमा सम्बन्ध सुरू गर्न। वार्तालापले कुराकानीलाई अवरुद्ध गर्दा अप्ठ्यारो नहुनुहोस्: सबैलाई खुशी पार्नु असम्भव छ। केटीहरूसँग हाम्रो भिडियो च्याटले तपाईंलाई हजारौं व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने अवसर दिन्छ। मित्रवत, सफा, परोपकारी, मज्जाको कुरा गर्ने, वार्तालापमा ध्यान दिएर हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्, र तपाई निश्चित रूपले कसैलाई भेट्नुहुनेछ जो तपाईमा साँचो चासो राख्दछ।
मिलनसार हुनुहोस्, सम्पर्क गर्न पहिलो हुन नहिचकिचाउनुहोस् - र नयाँ रोचक र उपयोगी व्यक्ति तपाईंको जीवनमा देखा पर्नेछ!
भिडियो च्याट आरएफ © २०१।
सब भन्दा प्रसिद्ध रूसी भिडियो च्याट!
के तपाई डेटि fromबाट चम्किलो अनुभूति र खुशी चाहनुहुन्छ? हामी भर्खरको, सार्वभौमिक - भयानक योग्य भिडियो च्याटको प्रस्ताव गर्न अविश्वसनीय खुशी छौं, समान विचारधारा भएका व्यक्तिहरू खोज्न र इन्टरनेटमा समय खर्च गर्नका लागि सिधा उद्देश्य राखिएको। हाम्रो घर-विशेषज्ञले चाखलाग्दो डिजाईन लेखेका छन्: यसमा सुविधाजनक, व्यावहारिक ईन्टरफेस छ। व्यवस्थापनको आसानी - तपाईंलाई तपाईंको साथीहरू वा नयाँ परिचितहरूसँग विनीत कागजातमा रोमाञ्चक समय खर्च गर्न अनुमति दिनेछ।
प्रत्येक वर्ष, स्रोतको लोकप्रियता संचार उपकरणहरूको प्रावधानको कारण बढ्दछ। सहमत हुनुहोस् - यो सुविधाजनक छ, निश्चित रूपमा सबैको साथ सकारात्मक व्यवहार गर्न पूर्ण रूपमा पहुँचयोग्य छ, विश्वको विभिन्न भागहरूमा रहँदै, कार्यस्थल (कम्प्युटर) वा ल्यापटपबाट उठ बिना। यो ध्यान राख्नु पर्छ कि ठूलो वित्तीय लगानी आवश्यक छैन। नियमको रूपमा, सञ्चार सेवाहरू, भिडियो च्याट सेवाको प्रावधान प्रयोग गर्न भुक्तान लिइन्छ। एक घण्टा खर्च गर्ने पैसालाई एक मिनी बसले एकतर्फी यात्रासँग तुलना गर्न सक्दैन।
हाम्रो कम्पनीले VKontakte अनुप्रयोग बनाइसकेको छ जसमा धेरै व्यक्ति च्याट गर्न आउँछन्। के यो भालु कुञ्जी थिचेर वार्तालापहरूको लागि साथीहरू भेट्टाउन साँच्चिकै राम्रो छ? उपग्रह खोज्न सजिलो भयो। प्रक्रिया धेरै नै सरलीकृत गरिएको छ - आफ्नो कोठा नछोडी आत्मा जोडी पत्ता लगाउनको लागि, तपाईं अब विशेष सेवाको सहयोगमा गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण "प्रक्रिया" यस प्रकारको विवाह एजेन्सीहरू मार्फत गर्न सकिन्छ, र सीधा - यसलाई समावेश गरेर। प्रत्येक दिन, वर्ल्ड वाइड वेब को प्रयोगकर्ताहरु लाई अधिक कुराकानीहरु लाई हेर्न को लागी पुन: प्राप्ति प्राप्त हुन्छ, तर तिनीहरु ठूलो श्रोता वा प्राविधिक आविष्कारको घमण्ड गर्न सक्दैनन्। यो भिडियो च्याट, र एक साधारण सरल संचार ब्लग, र अन्य विषयगत च्याटहरू।
आकस्मिक साथीसँग भिडियो च्याटको अर्थ के हो? तपाईं केवल यात्रुहरू बटुल्नेहरूलाई मात्र भेट्नुहुनेछ, तर तपाईंको समान विचारधाराका व्यक्तिहरू। साथै, त्यस्ता सेवाहरू विषयगत द्वारा प्रदान गरिएको छ: मोटर चालकहरूको लागि च्याट, जुन युवा विषयहरूमा विशेषज्ञता, पुरानो, मध्यम पुस्ताको लागि फोरम, र अन्य।
रुसी भिडियो च्याटमा राम्रो परिचित!
तपाईंले १००% वाक्यांशहरू सुन्नुभएको छ: "उनीहरू भिडियोभेटमा भेटे र एक बर्ष पछि विवाह गरे", वा उदाहरणका लागि: "उनका सब भन्दा मिल्ने साथीले उनलाई भेटे"। धेरै मैत्री, प्रेम संघहरु वर्ल्ड वाइड वेब को उपयोग गरेर पुन: निर्माण गरियो, यद्यपि धेरै व्यक्तिहरु, यस तरीकाले सम्बन्ध बनाउन कोशिस गरे र एकै समयमा असफल भए, यो उद्यमलाई सँधैका लागि फ्याक। त्यसोभए कहाँ तार्किक ढ completed्गले सम्पन्न भयो, भिडियो च्याटमा धेरै सफल चापलुसी क्षणहरू कहाँ सुरू हुन्छ?
तपाईले सुरू गर्नु अघि तपाई यो भन्न चाहानुहुन्छ, प्राथमिकता भनेको ती मानिस हुन् जो चिनिएका हुन्छन्, किनकि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जो च्याट रूलेट मार्फत परिचित हुन्छन् - तिनीहरू लजालु छन्, कहिलेकाँहि अलि असुरक्षित पनि हुन्छन्, तिनीहरूसँग ठूलो चाहना हुँदैन। राम्ररी सोचिसकेपछि, यो चरणमा जानु महत्त्वपूर्ण छ, तर याद राख्नुहोस् कि तपाईंको कथन पहिलो पटकबाट - तपाईं सूचीबद्ध अंकहरू द्वारा जम्मा हुनुहुनेछ। कति व्यक्तिहरू - यति धेरै विचारहरू, इच्छाहरू ... आखिर, त्यहाँ त्यस्तो कोही छ जो त्यस्तो अनौंठो व्यक्तिहरूलाई भेट्न चाहन्छ? त्यसैले तुरुन्तै निराश नहुनुहोस्।
यो स्टिरियोटाइपलाई तोड्न यो धेरै नै सजिलो छ। केहि चरणहरू पार गरिसकेपछि, कुनै पनि पत्राचार यसको सहभागीहरूको बैठक छलफल गर्न नजिक आउँदछ। यदि यो कुरा आयो भने, पहल तपाइँबाट आउनुपर्दछ। यो चाल प्रयोग गर्दै - दृढ संकल्प, लगनशीलता देखाउनुहोस्।
यो मानक जान्नु महत्त्वपूर्ण छ: सूत्रगत वाक्यांशहरू प्रयोग गर्न बिर्सनुहोस्। यो सत्य हो कि अपवादले ती केसहरू समावेश गर्न सक्दछ जब वार्तालापकर्ताले उनीहरूलाई पहिले प्रयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो। यो तपाइँको प्रत्येक सन्देश संचार गर्दा अद्वितीय र रमाईलो बनाउन चोट लाग्दैन।
थोरै कल्पना गर्नुहोस्, कसैले भने पनि होला - आफूलाई देख्ने व्यक्तिको सट्टा आफूलाई कल्पना गर्नुहोस्। "खाली" जनगणना सुरू गर्न र क्यामेराको नजिक नग्न देखा पर्दैन! यो प्रश्न विनम्रतापूर्वक, न्यायोचित रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ। विचारपूर्वक विचार उत्पन्न गर्न को लागी, सही लेख्नुहोस्। जे भए पनि यसले तपाईमा चासो बढाउन सक्छ।
राम्रो सोच्दै - कुनै पनि अनुप्रयोगको मुख्य प्लस जस्तै:
- ईमानदारी। सकेसम्म ईमानदार हुन कोसिस गर्नुहोस्। यदि तपाईंले अपोइन्टमेन्ट गर्नुभयो भने, तपाईंको साथी निराश हुन सक्नुहुन्छ यदि तपाईंले धोका दिनुभयो भने। यस अवस्थामा, प्रयासहरू व्यर्थमा हुनेछ ...
व्यक्ति जो असाध्यै निराश भएका छन् - त्यहाँ थोरै छन्, तर तिनीहरू दैनिक जीवनमा भेट्छन्। अक्सर यी व्यक्तिहरूद्वारा प्रस्तुत तर्कहरू हुन्छन्: "इन्टरनेटमा, उसले मसँग भिन्नै कुराकानी गर्‍यो ..."। यदि तपाईं यस्तो चिन्ताको विषयलाई चिन्ता गर्न चाहनुहुन्न - ईमान्दार हुनुहोस्, सायद केही विनम्र हुनुहोला, पक्कै पनि तपाईंले रूसी भिडियो च्याट वीडोरुलेका.इनका नियमहरू उल्ल !्घन गर्नु हुँदैन।
सिक्का खरीद गरेर राम्रो उपहार बनाउनुहोस्।
तपाईं उपहार प्रयास गर्न तयार हुनुहुन्छ? यसको मतलब यो हो कि तपाईंले संयुक्त छुट्टीको लागि उपयुक्त विषय फेला पार्नुभयो र तपाईंले Badanga लिमिटेड द्वारा उपलब्ध गराईएको अनुप्रयोगको प्रयोग गरेर आन्तरिक बिल खरीद गर्नु पर्छ। यदि तपाईंलाई सल्लाह चाहिएको छ भने - रूसी भिडियो च्याट रूले "भिडिओरुलेत्का" लाई वेबमनी, क्विवी, यान्डेक्स पैसा, कुनै पनि बैंक कार्ड मार्फत आफ्नो ब्यालेन्स माथि राख्न सल्लाह दिन्छ। माथि, त्यहाँ अनुकूल विकल्पहरू छन्, किनकि १० सिक्का (२० दिनको सञ्चार, यदि एकै समयमा तपाईं हृदयबाट उपहार दिन खोज्नुहुन्न भने) माथिको इलेक्ट्रोनिक प्रणालीहरू प्रयोग गरेर - $ १०। यी सुरक्षित, सबै भन्दा लाभदायक, सरलीकृत विधिहरू हुन्, जहाँबाट कुनै प्रश्न उठ्दैन।
एसएमएस भुक्तानी, पठाउन एक विशिष्ट छोटो नम्बरमा जान्छ। यो चरणमा आन्तरिक सन्तुलन पुनःपूर्ति गर्न मुख्य रूपले लाभहीन छ। यो ग्राहकको लागि केवल coins सिक्का हो। अपरेटरमा पनि निर्भर गर्दछ। $ १० को लागि, त्यहाँ दस सिक्का हुन सक्छन्, बैंक कार्डको साथ पुनः भरिपूर्ण। तिनीहरू मध्ये धेरै जसो गति र मोबाइलमा खाताको कारण अक्सर रिचार्ज हुने गर्दछ। "भिडरियोलेत्का" ले एक अनुरूप बनायो, छोटो नम्बर मार्फत तिर्ने, एसएमएस पठाउन बेकम्मा हुने छ, छोटो सन्देश पठाए पछि - रकमको आधा - टेलिकम अपरेटरले हटाईन्छ। यहाँ पुनः भरपाईको वास्तविक समस्या4मा प्रकट भयो, गहिराइको १० कोपेक होइन। अधिकतम सुविधा को लागी।
भिडियो च्याट कसरी भयो?
इन्टरनेटको जन्म भएको समयदेखि हामी पनि कम्प्युटर नवीन टेक्नोलोजीहरूको सञ्चारको क्षेत्रमा वैज्ञानिक र प्राविधिक प्रगतिमा द्रुत गतिमा अघि बढिरहेका छौं। धेरैले यस प्रकारका छलफलहरू आविष्कार गर्न प्रयास गरेका छन् जुन अनलाइन अनुरूप मिल्दछ, एक अर्कालाई हेर्न अझ राम्रो हुन्छ। कृपया नोट गर्नुहोस् कि सबै वास्तविक समयमा हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा, पहिलो पटक, सरकारसँग घटनाक्रम देखा पर्‍यो, त्यस्ता सफ्टवेयर अतुलनीय, वर्गीकृत थिए; ती राज्यको विभिन्न परीक्षण र अर्धसैनिक आपरेशनमा प्रयोग भएको थियो। स्तर पहिलो "मैत्री" एक १ 198 88 मा पुन: जन्म भएको थियो, यसलाई "इन्टरनेट रिले च्याट" पनि भनिन्थ्यो। हो, क्षेत्र मा यस्तो नवीनता: "विश्व आन्दोलन" तुरुन्त लोकप्रिय भयो। यो अभिनव थ्रेड अनलाइन च्याट कोठा निर्माणको लागि आधारको रूपमा सेवा गर्‍यो।यो एक भिडियो च्याट को निर्माण को लागी विशेष आधारहरु गठन। टेक्निकल डेभलपरले लेखेका कार्यात्मक संसाधनहरूको अपग्रेड, सुधार र बृद्धि भएपछि, नयाँ सफ्टवेयरमा कुनै पनि आगन्तुकले कुनै पनि प्रयास बिना नै सबै प्रकारको कुराकानीमा सजिलै कुराकानी गर्न सक्दछ।
यस सफ्टवेयरको विकासको क्रममा, हालका प्रजातिहरू आविष्कार भइसकेका छन्। "प्रत्यक्ष" छविको आवश्यकताको परिणाम स्वरूप त्यहाँ एक गैर-मानक उपकरणको आविष्कारको आवश्यकता पर्‍यो - वेब क्यामेरा। पहिलो पटक, यो ग्याजेट, वा तपाइँ "उपकरण" लाई पनि तुलना गर्न सक्नुहुनेछ, प्रोग्रामहरू देखा पर्दा तीन बर्ष पछि, अर्थात् १ 199 199 १ मा (आजकल प्रायः हरेक सोच्ने मेसिन यससँग सुसज्जित छ)। यो नवीनताले सबैलाई अनुमति प्रदान गरेको छ जो आज एक धारा सिर्जना गर्न र शिकार गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न वा यसको विपरित, घर नछोडी अज्ञात व्यक्तिहरूको खोजी गर्न चाहान्छन्। हामी हिम्मतका साथ घोषणा गर्छौं कि भिडियो च्याट प्रयोगकर्ताहरू वेब कैमरा जस्तो मिनी टेकनीकको लागि आभारी छन्। यसलाई वेबक्यामको साथ साझा गरौं - धन्यवाद!
यदि तपाईं यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने, सही आकस्मिक भिडियो च्याट शब्दहरू पठाएर समान जानकारी एक्सचेन्ज पोइन्टहरूको अगुवा हो। तपाईं एक व्यक्ति चिन्तन गर्न सक्नुहुनेछ, सुन्ने क्षमता राखेर सुन्नुहोस्, बोल्न, महसुस गर्न - घरमा बसेर। अब क्रममा हुने फाइदाहरूमा एक नजर राखौं। ध्यान दिएर गरिमालाई हेर्नु हो! तपाइँ तपाइँको विपक्षी चिन्तन गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईं मानक च्याटमा हुनुहुन्छ वा उही प्रख्यात डेटि sites साइटहरूमा, यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ - तपाईं फोटो देख्न खुशी हुनुहुन्छ (वा चित्र, यसलाई समावेश गरिएको छैन) - तपाईं यहाँ अवलोकन गर्नुहुन्छ र निश्चित गर्नुहुन्छ कि तपाईं कससँग व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। उदाहरणको एक प्रशस्तता छ, हामी लाग्छ दिमागका लागि यो समाचार होईन, जब आगन्तुकहरूले अन्य व्यक्तिको फोटो लिन्छन्, तर त्यहाँ ताराहरूका मोडेल फोटोहरू छन् जुन हामीलाई थाहा छैन। अवश्य पनि, यो गाह्रो छ अन्य व्यक्तिको कार्यहरूलाई उत्प्रेरित गर्न, साँचो लक्ष्य बुझ्नको लागि - हाम्रो लागि व्यक्तिगत रूपमा यो व्याख्या गर्न सकिँदैन,यद्यपि, त्यस्ता वार्तालापका साथ फोरप्लेको नतिजामा निराशा स्पष्ट छ। सहमत - कुराकानी गर्दा, हामीले पहिले नै आगन्तुकलाई विभिन्न प्रकारको र in्गको आधारमा पत्ता लगायौं, सार्वजनिक जानकारीको फोटोको आधारमा ... चरित्र, तरीका ... पछि यो थाहा पाउनु एकदमै घृणित कुरा हो कि पछि उहाँ जस्तो देखिनुहुन्न। चित्रमा चित्रित व्यक्ति। मलाई लाग्छ कि यो सहि व्यक्तिलाई बस्नको बारेमा सोच्नको लागि धेरै पीडादायी छ, कुनै पनि पारस्परिक लाभदायक सम्बन्धको बारेमा, तपाईंले लि out्ग पाउनुहुनेछ र यो तपाईंको विपरित होईन! आफ्नै परी कथाको एक स्तब्ध, निराश चरित्रको अवस्था कल्पना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, जसले डेटा प्रसारण च्यानलहरूको सहयोगमा लामो वार्ता पछि सयौं सन्देश र अनुभवी सकारात्मक भावनाहरूको गुच्छा अनुभव गरे ... अवलोकन गर्दै कि उनको (उनको ) छनौट विपरीत लिंगको एक हमलाकर्ता थियो। म त्यस्तो अवस्थामा हुन चाहन्न - यो अस्पष्ट छ।सहमत - कुराकानी गर्दा, हामीले पहिले नै आगन्तुकलाई विभिन्न प्रकारको र in्गको आधारमा पत्ता लगायौं, सार्वजनिक जानकारीको फोटोको आधारमा ... चरित्र, तरीका ... पछि यो थाहा पाउनु एकदमै घृणित कुरा हो कि पछि उहाँ जस्तो देखिनुहुन्न। चित्रमा चित्रित व्यक्ति। मलाई लाग्छ कि यो सहि व्यक्तिलाई बस्नको बारेमा सोच्नको लागि धेरै पीडादायी छ, कुनै पनि पारस्परिक लाभदायक सम्बन्धको बारेमा, तपाईंले लि out्ग पाउनुहुनेछ र यो तपाईंको विपरित होईन! आफ्नै परी कथाको एक स्तब्ध, निराश चरित्रको अवस्था कल्पना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, जसले डेटा प्रसारण च्यानलहरूको सहयोगमा लामो वार्ता पछि सयौं सन्देश र अनुभवी सकारात्मक भावनाहरूको एक समूहको अनुभव गरे ... अवलोकन गर्दै कि उनको (उनको ) छनौट विपरीत लिंगको एक हमलाकर्ता थियो। म त्यस्तो अवस्थामा हुन चाहन्न - यो अस्पष्ट छ।सहमत - कुराकानी गर्दा, हामीले पहिले नै आगन्तुकलाई विभिन्न प्रकारको र in्गको आधारमा पत्ता लगायौं, सार्वजनिक जानकारीको फोटोको आधारमा ... चरित्र, तरीका ... पछि यो थाहा पाउनु एकदमै घृणित कुरा हो कि पछि उहाँ जस्तो देखिनुहुन्न। चित्रमा चित्रित व्यक्ति। मलाई लाग्छ कि यो सहि व्यक्तिलाई बस्नको बारेमा सोच्नको लागि धेरै पीडादायी छ, कुनै पनि पारस्परिक लाभदायक सम्बन्धको बारेमा, तपाईंले लि out्ग पाउनुहुनेछ र यो तपाईंको विपरित होईन! आफ्नै परी कथाको एक स्तब्ध, निराश चरित्रको अवस्था कल्पना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, जसले डेटा प्रसारण च्यानलहरूको सहयोगमा लामो वार्ता पछि सयौं सन्देश र अनुभवी सकारात्मक भावनाहरूको एक समूहको अनुभव गरे ... अवलोकन गर्दै कि उनको (उनको ) छनौट विपरीत लिंगको एक हमलाकर्ता थियो। म त्यस्तो अवस्थामा हुन चाहन्न - यो अस्पष्ट छ।सार्वजनिक जानकारीको फोटोमा भर पर्दै ... चरित्र, तरीका ... यो पछि घृणास्पद हो कि पछि कि ऊ चित्रमा चित्रित व्यक्तिको जस्तो देखिँदैन। मलाई लाग्छ कि यो सहि व्यक्तिलाई बस्नको बारेमा सोच्नको लागि धेरै पीडादायी छ, कुनै पनि पारस्परिक लाभदायक सम्बन्धको बारेमा, तपाईंले लि out्ग पाउनुहुनेछ र यो तपाईंको विपरित होईन! आफ्नै परी कथाको एक स्तब्ध, निराश चरित्रको अवस्था कल्पना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, जसले डेटा प्रसारण च्यानलहरूको सहयोगमा लामो वार्ता पछि सयौं सन्देश र अनुभवी सकारात्मक भावनाहरूको एक समूहको अनुभव गरे ... अवलोकन गर्दै कि उनको (उनको ) छनौट विपरीत लिंगको एक हमलाकर्ता थियो। म त्यस्तो अवस्थामा हुन चाहन्न - यो अस्पष्ट छ।सार्वजनिक जानकारीको फोटोमा भर पर्दै ... चरित्र, तरीका ... यो पछि घृणास्पद हो कि पछि कि ऊ चित्रमा चित्रित व्यक्तिको जस्तो देखिँदैन। मलाई लाग्छ कि यो सहि व्यक्तिलाई बस्नको बारेमा सोच्नको लागि धेरै पीडादायी छ, कुनै पनि पारस्परिक लाभदायक सम्बन्धको बारेमा, तपाईंले लि out्ग पाउनुहुनेछ र यो तपाईंको विपरित होईन! आफ्नै परी कथाको एक स्तब्ध, निराश चरित्रको अवस्था कल्पना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, जसले डेटा प्रसारण च्यानलहरूको सहयोगमा लामो वार्ता पछि सयौं सन्देश र अनुभवी सकारात्मक भावनाहरूको एक समूहको अनुभव गरे ... अवलोकन गर्दै कि उनको (उनको ) छनौट विपरीत लिंगको एक हमलाकर्ता थियो। म त्यस्तो अवस्थामा हुन चाहन्न - यो अस्पष्ट छ।एक व्यक्तिसँग बस्नको बारेमा सोच्दा, कुनै पनि पारस्परिक लाभदायक सम्बन्धको बारेमा, तपाईंले लि the्ग भेट्टाउनुहुनेछ र यो तपाईंको विपरित होईन भन्ने तथ्यलाई सहनु यो धेरै दुखदायी हुन्छ! आफ्नै परी कथाको एक स्तब्ध, निराश चरित्रको अवस्था कल्पना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, जसले डेटा प्रसारण च्यानलहरूको सहयोगमा लामो वार्ता पछि सयौं सन्देश र अनुभवी सकारात्मक भावनाहरूको एक समूहको अनुभव गरे ... अवलोकन गर्दै कि उनको (उनको ) छनौट विपरीत लिंगको एक हमलाकर्ता थियो। म त्यस्तो अवस्थामा हुन चाहन्न - यो अस्पष्ट छ।एक व्यक्तिसँग बस्नको बारेमा सोच्दा, कुनै पनि पारस्परिक लाभदायक सम्बन्धको बारेमा, तपाईंले लि the्ग भेट्टाउनुहुनेछ र यो तपाईंको विपरित होईन भन्ने तथ्यलाई सहनु यो धेरै दुखदायी हुन्छ! आफ्नै परी कथाको एक स्तब्ध, निराश चरित्रको अवस्था कल्पना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, जसले डेटा प्रसारण च्यानलहरूको सहयोगमा लामो वार्ता पछि सयौं सन्देश र अनुभवी सकारात्मक भावनाहरूको गुच्छा अनुभव गरे ... अवलोकन गर्दै कि उनको (उनको ) छनौट विपरीत लिंगको एक हमलाकर्ता थियो। म त्यस्तो अवस्थामा हुन चाहन्न - यो अस्पष्ट छ।सयौं सन्देशहरू र अनुभवी सकारात्मक भावनाहरूको एक समूह अनुभव ... उनको (उनको) विकल्प विपरीत लि of्गको हमलाकर्ता हो भनेर हेरेर। म त्यस्तो अवस्थामा हुन चाहन्न - यो अस्पष्ट छ।सयौं सन्देशहरू र अनुभवी सकारात्मक भावनाहरूको एक समूह अनुभव ... उनको (उनको) विकल्प विपरीत लि of्गको हमलाकर्ता हो भनेर हेरेर। म त्यस्तो अवस्थामा हुन चाहन्न - यो अस्पष्ट छ।
रोक! संचारको लागि इन्टरनेट भिडियोचट प्रयोग गरेर, तपाईं सजिलैसँग यस्ता अप्रिय क्षणहरू हटाउन सक्नुहुन्छ। 5D मा जस्तै - पत्राचार, सम्पर्क स्थापना, उज्ज्वल परिचित - सम्भव भएसम्म वास्तविकताको न्यानो वातावरणमा ठाउँ लिन्छ। बाह्य समानता तपाईंको अगाडि छ, त्यसैले त्यहाँ एक विकसित प्रशिक्षित दिमाग पनि समावेश गर्न र नराम्रो घटनाहरूको बारेमा सोच्न केही छैन। तपाईं खुशीसाथ व्यवहार गर्नुहुन्छ, जबकि पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुनुहुन्छ, यदि बाह्य समानतामा छैन भने, त्यसोभए साथी वा परिचितको इरादाहरूको ईमानदारीमा।
अनियमित भिडियो च्याट र यसको कार्यान्वयनको सिद्धान्त।
भिडियो च्याट प्रयोग गर्न, तपाईंलाई निम्न घटकहरू चाहिन्छ:
- पहिलो: नेटवर्कमा पहुँचको साथ एक व्यक्तिगत ल्यापटप (राम्रो छवि अधिग्रहण र आपसी संवादको लागि - एल्गोरिथ्मलाई स्वागत गरिएको छ: "उच्च गति, अधिक अद्भुत");